Nintendo Switch Lite Yellow ~ ICT.com.mm
HomeToday's DealsNintendo Switch Lite Yellow
Google Pixelbook Go i5 Chromebook Black (8GB/128GB)Back to Today's DealsAOC GK500 Mechanical Keyboard
5.5″ touch screen Handheld-only Switch device Compatible with Nintendo Switch games that support Handheld mode Battery Life: Approximately3–7hours *The battery life will depend on the games you play.... [Learn more]
Brand: NintendoSKU: 150121N/ASee more: Console Gaming, Console Gaming Promo, Flash Sale, Gaming System, New Arrivals, Nintendo, Products, Shop, Staff Picks, Today's Deals, WarehouseFilter by: Flash Sale, Nintendo Systems, Promotion, Warehouse
Battery Life: Approximately3–7hours *The battery life will depend on the games you play. For instance, the battery will last approximately4hours for The Legend of Zelda: Breath of the Wild.
နာမည်ကျော် ဂျပန်ဂိမ်းကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ Nintendo မှ ထုတ်လုပ်ပေးထားတဲ့ Nintendo Switch Lite ဂိမ်းစက်ဖြစ်ပါတယ်။ မျက်နှာပြင်က အရွယ်အစား 5.5” ရှိပြီး Touch Screen အမျိုးအစား ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ကိုင်ဂိမ်းခလုတ်အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး Handheld mode ကို ထောက်ပံ့တဲ့ Nintendo Switch Games တွေ အားလုံးကို ကစားနိုင်ပါတယ်။ ဘတ္ထရီအသုံးပြုမှုက (၃) နာရီမှ (၇) နာရီအထိ ကြာမြင့်မှာဖြစ်ပြီး ကြာမြင့်ချိန်က သင်ကစားတဲ့ဂိမ်းအမျိုးအစားပေါ်မှာ မူတည်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ - The Legend of Zelda: Breath of the Wild ဆိုတဲ့ဂိမ်းမျိုးကို ကစားခဲ့မယ်ဆိုရင် ဘတ္ထရီအားက (၄) နာရီအထိ ခံနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Joy-Con controllers တွေတော့ မပါဝင်ပါဘူး။ Nintendo Switch နဲ့ Nintendo Sitch Lite စုစုပေါင်း (၈) ခု အထိချိတ်ဆက်ပြီး Multiplayer ဂိမ်းတွေကို ကစားနိုင်ပါတယ်။ စမတ်ဖုန်းတွေလို ကလေးငယ်နဲ့ လူငယ်လေးတွေအတွက် မသင့်တော်တဲ့ ဂိမ်းတွေနဲ့အခြားအရာတွေပါလာမှာကို မစိုးရိမ်ရတာကြောင့် မိဘတွေအတွက် စိတ်အေးရစေမှာပါ။
Total price:K456,000 K352,200
This item: Nintendo Switch Lite Yellow K399,000 K309,000